शैम्पेन कसरी छनौट गर्ने?
खाना नोटको मालिसमा
हाम्रो देशमा, शैम्पेनलाई अनिवार्य नव वर्ष विशेषता मानिन्छ। र वास्तवमा, च्याम्पियनको बिक्रीको मात्राले नयाँ वर्षको अन्तर्गत मात्र वृद्धि गर्छ।
तर यसबाहेक, शैम्पेन हरेक उत्सवको लागि नशेको हुन्छ, र यो प्रायः उपहारको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। र यस पेय को खरीद देखि एक आसान कार्य छैन, हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छ कि कसरी सही शैम्पेन चुन्नुहोस।
सुरु गर्नका लागि, हामी ध्यान दिनुहोस् कि सर्वश्रेष्ठ शैम्पेन को लागि कुनै पनि सही छनौट छैन। धेरै कम्पनीहरूले राम्रो शैम्पेन उत्पादन गर्छन्, र तिनीहरूमध्ये प्रत्येक एकै भन्दा बढी प्रकारका छन्। यसैले, वास्तविक गुण शैम्पेन कसरी छनौट गर्ने भन्ने प्रश्नमा, तपाइँ निर्माताको प्रतिष्ठामा न केवल फोकस गर्न आवश्यक छ, तर तपाईंको स्वाद प्राथमिकताहरूमा पनि। यो गर्न को लागी, तपाईं को किस प्रकार को शैम्पेन को समझना चाहिए।
शैम्पेन छनौट गर्न केले मद्दत गर्न सक्छ?
च्याम्पियनले चीनी सामग्रीमा फरक पार्दछ। चिनियाँको ठूलो अंश बढ्ने क्रममा शैम्पेनको प्रकारहरू यहाँ छन्:
च्याम्पेन एक्स्ट्रा ब्रुटमा प्रति लीटर6ग्राम को लागी हुन्छ;
च्याम्पियन ब्रटमा प्रति लीटर 15 ग्राम माथिको लीटर हुन्छ;
च्याम्पियन सूखीमा प्रति लीटर 15 देखि 25 ग्राम प्रति लीटर;
च्याम्पेन उप-सूखी प्रति 40 देखि 45 ग्राम प्रति लीटर;
च्याम्पेन अर्द्ध-सेतो सेतोले प्रति लीटर 60 देखि 65 ग्रामसम्मको लिटर;
च्याम्पेन अर्द्ध-मीठो रातो लालमा 80 देखि 85 ग्राम प्रति लीटर सम्म हुन्छ।
यो मानिन्छ कि वर्तमान शैम्पेन को बिना चीनी को अतिरिक्त बनाया जाना चाहिए। त्यो हो, गोरमेट्स ब्रुट पिउन रुचाउँछन्, वा सुक्खा च्याम्पेन। तर यस्तो शैंपेन थोपा स्वाद छ र सबै मानिसहरू यो पिउन मन पराउँदैनन्। र विश्व स्तरका अनुसार, यो शैम्पनी गुलाबी वा रातो हुन सक्दैन।
त्यसोभए स्वाद को लागि सही शैम्पेन कसरि चुन्नुहोस? सरल विकल्प यो स्पार्कलिंग मदिराको चश्मा हो, जहाँ तपाईले मनपराउन सक्नुहुने च्याम्पियनमा कुन चीजको निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँसँग त्यस्तो अवसर छैन भने, तपाइँ चयन विधि प्रयोग गरेर कुनै पनि फारममा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
गुणस्तर शैम्पेन कसरी छनौट गर्ने?
तपाईं निम्न मापदण्डद्वारा शैम्पेन गुणस्तरको मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ:
शैम्पेन, ठुलो प्लास्टिकको ढोका र कार्क बीच छनौट, यो दोस्रो विकल्पमा प्राथमिकता दिन राम्रो छ। च्याम्पियनको गुण धेरै प्रभावित नहुन सक्छ, तर कागर्कको प्रयोगको प्रयोगले निर्माताको गम्भीरता र ईमानदारतालाई संकेत गर्दछ।
बोतल को शैंपेन को बारी र तल देखो। यो तलवार, टर्बलिटिटी, फ्लेक्सहरू हुनु हुँदैन। अन्यथा, यसले शैम्पेनको लागि खराब गुणस्तरको उत्पाद वा गलत भण्डारण अवस्थालाई संकेत गर्दछ।
शैम्पेन को गिलास मा डाल दिए पछि, एक मोटी फोम बनाया, जो चाँडै बसें। र त्यो गिलासमा बस्नु पछि फोम को एक सानो रङ्ग रहनु पर्छ।
यदि तपाईं केहि समय को लागी एक गिलास को शैंपेन छोडें, तब यो "भागो नहीं" हुनु पर्छ। एक राम्रो सूचक 10 घन्टा को समयमा स्पार्कलिंग को रखरखाव हो। तर केही ब्रान्डहरू स्पार्कलिंग र एक दिनमा राख्छन्।
सस्तो शैम्पेन किन्नुहोस्। यदि तपाईं देख्नुहुन्छ कि एक विशेष बोतल को मूल्यहरु अन्य निर्माताहरु देखि शैम्पेन को मूल्य भन्दा धेरै कम छ, तब यो राम्रो छैन शैम्पेन किन्न को लागि।
यो चैंपेन केवल कालो गिलास संग बोतलों मा मात्र उत्पादन गरिन्छ। यदि च्याम्पियन एक हल्का कन्टेनरमा खसेको छ भने, जब सूर्यको प्रकाशको सामना गर्दा उत्पादको स्वादको विरूपणको सम्भावना उच्च हुन्छ।
शैम्पेन मा त्यहाँ कुनै शिलालेख हुनु हुँदैन जुन बाह्य स्वाद वा स्वादको उपस्थिति हो। अन्यथा, यस्तो उत्पादन अब शैम्पेनलाई मानिन्छ।
अब, हाम्रो सल्लाहको लागि धन्यवाद, तपाईंलाई थाहा छ कि कुन शैम्पेन स्टोरमा अलमारियाँ छनौट गर्न को लागी। हामी तपाईंलाई छनौट गर्न गल्ती छैनौं र केवल वास्तविक शैम्पेन पिउन चाहन्छौं।
उत्सव तालिकामा सेलोड बिना मेयनेज
जेली कसरी बनाउने?
लसुन चुनेको कसरी - मसालेदार बिलेटको सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन
मटर कसरी पकाउने?
पान पकाउने पकाउने व्यञ्जनहरू
घरको माटोलाई कसरी भण्डारण गर्ने - एक मूल्यवान उत्पादनको संरक्षण गर्ने उत्तम तरिका
रातो माछा संग क्यानडा
घरको पकाउने लागि मूल भर्नको सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन - pies को भरने
चकलेट कसरि बनाउने - घर मा मिठाई बनाउन उत्तम व्यञ्जनहरु
पालीफको लागि के चावल आवश्यक छ?
कसरी सफा गर्न सकिन्छ?
बफेट टेबल को लागि एपेटाइजर - व्यंजनहरु
आलु संग डम्पलिंग
फ्रिज को ऊर्जा वर्ग
प्रोजेस्टोन कम भयो
6 क्यूबाको बारेमा क्यूबा
स्लोनिक अवकाश र समारोह
कुन गन्धले चिसोलाई डराउँदछ?
सब्जिहरु को लागि प्लास्टिक बक्से
बिरालो पानी किन डराउँछन्?
चिह्न "मृतकको खोजी" - अर्थ, केले मदत गर्दछ?
महिलाहरु को नहाने स्नान
दाँतको हातले आफ्नै हातमा मास्टर वर्ग
नवजातमा हिचको खाना खाने पछि - के गर्न को लागी?
गहिरो अनुहार खुट्टा
14 प्रकारको प्रेमिका जसको साथ तपाईंले संचार गर्नुभयो
गर्भधारणको घोषणा पछि पहिलो प्रकाशित राहेल वेस
ओवनमा पकाएको आलुको लागि नुस्खा
मध्यम बाल 2016 को लागि महिला बाल कट्स - कास्केड
छत व्हाइटवाश कसरी गर्ने?